❤️ Ubakhulisa Kanjani Abalandeli Be-Instagram Ngokuhlelekile : 23 Izindlela zika-2021 - Facebook
I-Instagram isiphenduke inkundla yezokuxhumana yamabhizinisi ngokushesha. Ngezizathu ezisobala : I-13% yabantu bomhlaba iyayisebenzisa, futhi u-80% wabo ulandela izinkampani.
Ngesilinganiso esingu-4,21 % ukuthandwa, ukwabelana namazwana, U-Oberlo uthi ukusebenzelana kwamakhasimende akukaze kuqine. Idume ngokuphindwe kashumi kune-Facebook, I-Pinterest ne-Twitter ndawonye.
Ngakho-ke, Izinkampani ezicabanga phambili zifuna izindlela ezintsha zokuxhumana nabalandeli bazo be-Instagram, naphezu kobunzima. Ukukusiza ukuthi uthole okuningi ezinhlelweni zakho zokumaketha eziphilayo nezikhokhelwayo ngenkathi ulondoloza amaqhinga akho okuthengisa e-Instagram isikhathi eside., sihlanganise lolu hlu oluwusizo lwezincomo ezingama-23. Isikhathi sokuqala imikhosi.
Facebook. Kubuyekezwe ngokwesisekelo esifanayo.
Amabhrendi adinga ukusebenza uma efuna ukuthola abalandeli abasha futhi andise ukuzibandakanya, kodwa kufanele bakhuthale kangakanani ? Ucwaningo lubonisa ukuthi okuthunyelwe okukodwa noma okubili ngosuku kuhle.
Facebook. Kunokushumayela, wabelane ngezindaba.
Ukukhangisa kwezohwebo ku-Instagram kushaye indiva indima ye-Instagram njenge-”ithuluzi lokuphefumlelwa kwesithombe”, okuyilokho ekwakhelwe kona. Esikhundleni sokushumayela umlayezo wokuthengisa kubathengi bakho, sebenzisa izithombe, amavidiyo nombhalo ukuze ubahehe.
Facebook. Yakha igama lomkhiqizo elaziwayo.
Amabhizinisi azama ukukhulisa iphrofayili yawo ku-Instagram kufanele agxile ezintweni ezintathu ezibalulekile : obala, ukwehluka nokungaguquguquki. Indlela esheshayo nengahleliwe ngeke ilethe umphumela olindelekile.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Gcina ubuhle obungashintshi kukho konke okuphakelayo kwakho kwe-Instagram.
I-Instagram iyinethiwekhi yokuxhumana nabantu edume kakhulu nevidiyo ngenxa yokugcizelela kwayo ubuhle. Naphezu kweqiniso lokuthi ukukhanya okucwebezelayo akusekho emfashinini, okuqukethwe okubukwayo ku-Instagram akusoze kwalahlekelwa ukubaluleka kwakho.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Nquma ngama-hashtag afanelekile ozowasebenzisa.
Ama-hashtag owasebenzisayo ku-Instagram angaba umehluko phakathi kokuthunyelwe okwenza kahle nokuthunyelwe okugcina kungezansi ohlwini lwabantu abakulandelayo..
6. Gcizelela izinto ezikhiqizwe umsebenzisi.
Okuqukethwe okukhiqizwe ngabasebenzisi be-Instagram kuyisici esingcwele sokumaketha. Okuqukethwe kwakhiwa futhi kuvunywe imakethe yakho oyiqondisayo ngaphambi kokuthi kube bukhoma, ukunciphisa ukusetshenziswa kokuthengisa ngenkathi kukhulisa ukuzibandakanya kwamakhasimende.
7. Hlola amafomethi wevidiyo ahlukene atholakala ku-Instagram ukuze uthole ukuthi yini esebenza kangcono kumkhiqizo wakho..
Inani levidiyo lidlula kude lelesithombe.
8. Sebenzisa amagama-ncazo namathuluzi wamagama-ncazo avaliwe ku-Instagram.
Ngokusho kwe-Instagram, U-60% wezindaba uyalalelwa, kuyilapho ama-40% abukwa ngokuthula.
9. Ama-reel e-Instagram azozungeza ngemuva uma uwavumela.
Kubalulekile ukuqonda amafomethi amaningi okukhangisa epulatifomu, ngoba u-75% wabasebenzisa i-Instagram bathi bathatha isinyathelo “kuhlanganise nokuvakasha kwesayithi, yenza ucwaningo ku-Google noma utshele umngane” ngemva kokuthintwa okuthunyelwe.
10. Sebenzisa izihlungi ze-Instagram's augmented reality ukuze uzuze.
Isitudiyo se-Instagram sika-Spark AR senza kube lula kunoma ubani ukuthi enze izihlungi zangempela ezingathandwayo. Ngokubuka okungaphezu kwesigidigidi kwezinye zezihlungi ezinkulu ze-Instagram kusukela lapho, ukungathandwa kwabathelisi esikubona sekuthathe indawo yesikhulumi.
11. Sebenzisa Izinhlobo Zesikhangiso Sevidiyo Ye-Instagram.
12. Ama-GIF opopayi angaba mnandi uma eshiywa kumadivayisi awo.
I-GIF iyithuluzi elihle lamaqembu okuthengisa, ngoba ucwaningo lukhombisa ukuthi abathengi banamathuba amaningi okubukela amavidiyo wemizuzwana eyi-15 kuze kube sekupheleni..
13. Khulisa ukugcwala kwewebhusayithi yakho ngokuthepha kusizinda sabasebenzisi be-Instagram.
Njengoba i-Instagram ivumela isixhumanisi esisodwa kuphela esichofozekayo ku-bio yakho, kungasiza ukwandisa ithrafikhi kuwebhusayithi yakho.
14 Ungakwazi “ukuzuza” ku-Instagram kusetshenziswa ukwenziwa kwenjini yokusesha (I-Seo).
I-Instagram ne-SEO kungase kungabonakali njengabalingani bemvelo ekuqaleni, kodwa kunethiwekhi yanamuhla eqine kakhulu, kubalulekile ukuthi i-akhawunti yakho ye-Instagram ibe nohlelo lwe-SEO endaweni.
15. Sebenzisa ama-micro-influencer ukuthuthukisa isithunzi sebhizinisi lakho
Siyabonga nge-Instagram influencer marketing, sekuya ngokuya kuvame ukusebenzisa abaholi bemibono yemboni ukufinyelela izethameli eziningi ngemiyalezo yezentengiso.
16. Nikeza umklomelo kumuntu othatha isithombe esidala kakhulu se-Instagram.
Imiqhudelwano iyindlela enhle yokwandisa ukusebenzelana kwakho nabalandelayo be-Instagram.
17. I-Instagram ingasetshenziswa njengethuluzi lokumaketha ukukhulisa isibalo sabantu ababhalisela uhlu lwakho lwe-imeyili.
Uma kuziwa ekwakheni ubudlelwano besikhathi eside nabathengi, i-imeyili ihlala iyindlela yokuxhumana ethandwayo. Ukusebenzisa Igajethi ye-Instagram Kungakusiza Ukuzuza Abalandeli Be-Instagram Abengeziwe (isicelo).
18. Sebenzisa Izindaba ze-Instagram.
Ngabasebenzisi bansuku zonke abayizigidi ezingama-500, Izindaba ze-Instagram zakhuphuka ngokushesha zafinyelela phezulu ekudumeni kwenkundla. Isici sezindaba ze-Instagram sinokucabanga ukuthi singagcina sithathe indawo yokuphakelayo okuyinhloko.
19. Faka isixhumanisi sezindaba zakho ze-Instagram kuphrofayela yakho.
Phambilini, abasebenzisi be-Instagram abaqinisekisiwe kuphela abangangeza isixhumanisi ” Buka Okuningi ” ezindabeni zabo, kodwa manje, noma ubani one-akhawunti yomsebenzi futhi okungenani abalandeli be-10,000 bangakwenza.
20. Zisebenzise kahle izithonjana.
Ama-Emoji, ngokuqondile, nikeza inzuzo ngaphezu kokuxhumana kombhalo uma usetshenziswa ku-Instagram. Esikhathini lapho izithonjana zigcwele khona (futhi abaningi bayeza), kubalulekile ukuthi ube nohlelo lokuzisebenzisa elikhombisa ubunjalo bebhizinisi lakho ngaphandle kokubonakala ukhululekile kakhulu.
21. Nyusa i-akhawunti yakho ye-Instagram kwezinye izinkundla zokuxhumana.
Nyusa isiteshi sakho se-Instagram kubantu abaningi ngangokunokwenzeka. Ungakwazi ukukufeza, Ngokwesibonelo, ngokufaka isixhumanisi ekhasini lakho le-Instagram kusibuyekezo sesimo se-Facebook.
22. Kuwo wonke idokhumenti, sebenzisa izingcingo esenzweni (Ctas).
Sebenzisa ngokugcwele iphromoshini yakho ye-Instagram, noma ngabe ithandwa kakhulu. Faka ucingo olucacile lwesenzo ku-Instagram.
23. Naka okuthunyelwe kwakho okuphawuleka kakhulu kwe-Instagram futhi ubhale amanothi okuthi ungakuthuthukisa kanjani.
Yifunde “ifomula” ukukhulisa inombolo yakho yabalandeli ku-Instagram futhi ulisebenzise esu lakho lokunyusa ukuze uthole abalandeli abaningi.
23 Izindlela zika-2021Facebook